China Water Chiller Emeputa na Supplier | Xinneng
Igwe mmiri a na-akpọkarị friza, chiller, igwe mmiri ice, igwe mmiri na-agba mmiri, igwe jụrụ oyi, wdg, n'ihi ojiji dị iche iche nke ndụ, yabụ aha a na-apụghị ịgụta ọnụ. igwe nke na - ewepu vapors mmiri site na mkpakọ ma ọ bụ ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ikuku.
Igwe mmiri a na-akpọkarị friza, chiller, igwe mmiri ice, igwe mmiri na-agba mmiri, igwe jụrụ oyi, wdg, n'ihi ojiji dị iche iche nke ndụ, yabụ aha ahụ enweghị ọnụ ọgụgụ. igwe nke na - ewepu vapors mmiri site na mkpakọ ma ọ bụ ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ikuku. chiller na-eji mmiri eme ihe dị ka refrjiraeto, ma dabere na mmiri na lithium bromide solution n’etiti, iji nweta mmetụta friji siri ike nke mmekọrita.
A na-ejikarị mmiri na-eme ka mmiri dị mma na ikuku ikuku na ikuku ụlọ ọrụ. A na-ekesa mmiri oyi iji mee ka mmiri dị jụụ laghachi azụ. N'ime ngwa ngwa ụlọ ọrụ, mmiri jụrụ oyi ma ọ bụ mmiri ndị ọzọ na-agbapụta site na nfuli site na usoro ma ọ bụ ngwa nyocha ụlọ ọrụ. ndụ.
Nka na ụzụ data nke mmiri-mma unit
.Dị Ike w Evaporating temp. Gburugburu ebe obibi. Condenser Dimension① mm ntinye ntinye Size① mm Ijikọ Pipe mm Ibu n'arọ
Mmiri m³ / h .Dị A B C D E Ikuku Liquid
BFS41 Ugboro abụọ SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 25 12 159
BFS51 Ugboro abụọ SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 25 12 161
BFS 101 4.9 SLKD-010 / B 1127 330 716 800 280 32 19 225
BFS 151 7.6 SLKD-015 / B 1250 380 760 900 330 38 22 313
2YG-4,2 Ugboro abụọ SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 22 12 128
4YG-5.2 Ugboro abụọ SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 22 12 146
6WG-40.2 Ogugu 20.7 SLKD-050 / B1 1850 430 860 1300 380 54 35 455
4YD-4,2 Ugboro abụọ SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 28 12 143
4YD-5.2 Ugboro abụọ SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 28 12 146
Nkọwa ndị a kpọtụrụ aha n'elu na-edo onwe ha n'okpuru data n'ezie.
DAddieional cooiing ma ọ bụ oke suikpo ọkụ gas ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru -15 ℃.
DAddieional na-emekọ ihe ma ọ bụ na-amachi mmiri gas ma ọ bụ mmịpụta mmiri mmiri ma ọ bụrụ na ikpo ọkụ dị n'okpuru -20 ℃.
Nke gara aga: Mepee Undị Unit
Osote: Akpa ụdị Generator